नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड बीच मर्जर पक्काः स्वाप रेसियो ९० दिने सीइओ र अध्यक्ष नदिने ! - Aathikbazarnews.com नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड बीच मर्जर पक्काः स्वाप रेसियो ९० दिने सीइओ र अध्यक्ष नदिने ! -
हिमालयन बैंक लिमिटेडसंग मर्जर भाडिएपछि नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडसंग मर्जर गर्ने पक्का पक्की जस्तै भएको छ भन्दा अब फरक पर्दैन । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडका एक सञ्चालकले पंक्तिकारसंग भने नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड र मेगा बैंक लिमिटेड बीच ३÷४ चरणमा छलफल भयो । छलफलमा दुवै पक्ष मर्जर गर्न पक्षमै रह्यो । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले हामीलाई ९० प्रतिशत किता शेयर दिने कुरा गरेकोले हामी सकारात्मक छौं नि उनीले थपे अहिले मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडमा सीइओ खाली छ । यसले पनि मर्जर गर्न मद्दत पुगेको छ नि ।
उनीकै शब्द सापटी लिने हो भने अबको केही दिन भित्रै असार भित्रै नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड बीच मर्जरको सम्झौता हुँदै भन्दा अब फरक पर्दैन । यदि यी दुई बैंक बीच मर्जर भए नेपालकै ठूलो बैंक नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक बन्ने छ भन्दा फरक पर्दैन । आधा दर्जन विकास बैंक मिलेर बनेको उत्कृष्ट व्यापार गर्दै आएको मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडको चुक्ता पूँजी १६ अर्ब भन्दा बढि छ । भन्दा फरक पर्दैन ।
यी दुईबीच मर्जर सफल भए हालसम्मकै ठूलो बैंक बन्ने छ । दुई बैंक मर्ज भएपछि चुक्ता पुँजी ३२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ हुनेछ । जुन हाल वाणिज्य बैङ्कहरू मध्येकै ठूलो बैंक ‘ग्लोबल आईएमई बैंकको भन्दा ८ अर्बभन्दा बढी चुक्ता पुँजी पुग्नेछ ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड र मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड बीच मर्जर हुने करिब पक्का भएको देखिन्छ । हिमालयन बैंकसँग मर्जर भाँडिएसँगै अर्को पार्टनर खोजेको नेपाल इन्भेष्टमेन्टले मेगासँग मर्जरको गाँठो कस्ने भएको हो केही दिन अघि मात्र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकबीच मर्जरका लागि अन्तिम तयारी गर्दै स्वाप रेसियो टुङ्गो लगाइएको ती सञ्चालकले दाबी गरे । उक्त सम्झौता बमोजिम दुई बैंकको स्वाप रेसियो १००ः९० हुनेछ । अर्थात् मर्जरमा जाँदा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १०० बराबर १०० कित्ता नै हुँदा मेगा बैंकको १०० कित्ता बराबर ९० कित्ता हुने गरी सम्झौता हुने स्रोतले बताएको छ । यदि यी दुईबीच मर्जर सफल भए हालसम्मकै ठूलो बैंक बन्ने छ । दुई बैंक मर्ज भएपछि चुक्ता पुँजी ३२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ हुनेछ । जुन हाल वाणिज्य बैङ्कहरू मध्येकै ठूलो बैंक ‘ग्लोबल आईएमई बैंकको भन्दा ८ अर्बभन्दा बढी चुक्ता पुँजी पुग्नेछ ।
मर्जरपछि बन्ने बैंकको चुक्तापुँजीमा स्वाप रेसियोबाट आउने पैसाले दिने लाभांशले ३४ अर्बभन्दा बढी हुने देखिन्छ । मर्जरका लागि दुवै बैंकको सञ्चालक समितिले अबको दुई हप्ताभित्रै सम्झौता गर्ने तयारी गरेको देखिन्छ ।
हाल ग्लोबल आईएमई बैंकको चुक्ता पुँजी २३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।अहिले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको चुक्ता पुँजी १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ भने मेगा बैंकको १६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेको छ भन्दा फरक पर्दैन । थप मर्जरपछि बन्ने बैंकको चुक्तापुँजीमा स्वाप रेसियोबाट आउने पैसाले दिने लाभांशले ३४ अर्बभन्दा बढी हुने देखिन्छ । मर्जरका लागि दुवै बैंकको सञ्चालक समितिले अबको दुई हप्ताभित्रै सम्झौता गर्ने तयारी गरेको देखिन्छ ।
मर्जरमा जाँदा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १०० बराबर १०० कित्ता नै हुँदा मेगा बैंकको १०० कित्ता बराबर ९० कित्ता हुने गरी सम्झौता हुने स्रोतले बताएको छ । यदि यी दुईबीच मर्जर सफल भए हालसम्मकै ठूलो बैंक बन्ने छ । दुई बैंक मर्ज भएपछि चुक्ता पुँजी ३२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ हुनेछ ।
भनिन्छ यी दुई बैंक मर्जर पछि नाम नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक नै रहने छ भने सीइओ ज्योति प्रकाश पाण्डे र अध्यक्ष पुथ्वी बहादुर पाण्डे नै रहने छन् भने डिपुटी सीइओमा मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडकी डिपुटी सीइओ रविना देशराज श्रेष्ठ रहने सहमती भएको भेटिएको छ भने मेगा बैंकका ३ जना सञ्चालक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका ४ जना सञ्चालक रहने करिब करिब सहमति नै भएको भेटिएको छ ।नेपालका यी दुई वाणिज्य बैंक मर्जर भए नबिल बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक ठूला र बलिया बैंक बन्ने छन् । भन्दा फरक पर्दैन । सचेत भया ।